नेप्से दोहोर अंकले बढ्यो, लघुवित्तका लगानीकर्ताले धेरै कमाए - Sankalpa Khabar
3. भ्रमको राजनीति कहिलेसम्म ?
नेप्से दोहोर अंकले बढ्यो, लघुवित्तका लगानीकर्ताले धेरै कमाए
३० चैत्र १६:०८
काठमाडौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेमा सोमबार दोहोरो अंकले बढेको छ । आज नेप्से १७.२० अंकले बढेर दुई हजार छ सय ९१ दशमलब ५५ विन्दुमा पुगेको छ ।
त्यस्तै, आज ७ अर्ब ५० करोड ४७ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । आज कारोबार भएका एउटा समूहमध्ये ६ समूह बाहेक अन्यसबै समूह बढेका छन् ।
आज ९ कम्पनीको शेयरमूल्य सर्वाधिक बढेको छ । नेप्सेका अनुसार आज शेयरमूल्यमा उचच बृद्धि हुने कम्पनीहरुमा एनआईसी एसिया लघुवित्त वित्तिय संस्था, महिला लघुवित्त वित्तिय संस्था, छ्याङिद हाइड्रोपावर लिमिटेड, ज्याति लाइफ इन्स्योरेन्स, सिन्धु विकास बैंक, गुराँस लघुवित्त वित्तिय संस्था, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, साधना लघुवित्ति वित्तिय संस्था र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेका छन् ।
आज ७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। बैंकिङ १७, विकास बैंक ३९, निर्जीवन बीमा १६३, उत्पादन १४, माइक्रोफाइनान्स १८८ र जीवन बीमा समूह १९७ अंकले बढे। ब्यापार ६९, होटल तथा पर्यटन ७५, जलविद्युत ४२, अन्य २९ र फाइनान्स समूह १ अंकले घटे।
यस दिन कमाउनेमा लघुवित्तका सेयर लगानीकर्ता अगाडि देखिए। एनआइसी एसिया लघुवित्त, महिला लघुवित्त, सिन्धु विकास बैंकको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै छ्याङ्दी हाइड्रो र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको मूल्य पनि १० प्रतिशतले बढेको छ।
आजको कारोबारपछि एनआइसी एसिया लघुवित्तको मूल्य प्रतिकित्ता १५४५, महिलाको १०१७, छ्याङ्दीको २४५, ज्योतिको ४६८ रुपैयाँ कायम भएको छ।
गुराँस लघुवित्त, साधना लघुवित्तको मूल्य साढे ८ प्रतिशत धेरैले बढेको छ। समग्र बजार बढ्दा पनि सान्जेन जलविद्युतको मूल्य ४ प्रतिशतले घट्यो। हिमाल दोलखाको मूल्य पनि करिब ४ प्रतिशतले घटेको छ।
कारोबारका आधारमा यस दिन एनआइसी एसिया बैंक अग्रस्थानमा रह्यो। सो बैंकको २५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदा मूल्य ३ प्रतिशतले बढेर ९४९ रुपैयाँ कायम भएको छ।
त्यस्तै नबिलको २४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदा मूल्य बढेर १३४८ रुपैयाँ कायम भएको छ।